JHS BECE Past Questions – Full Package → 2011 Ghanaian Language & Culture – (Akuapem Twi) Past Questions – Paper Twi - Passco.Org
2011 Ghanaian Language & Culture – (Akuapem Twi) Past Questions – Paper Twi
1. Fa nsɛmfua bɛyɛ ɔha aduonum (150) anaa nea ɛboro saa twerɛ deɛ edidi soɔ yi mu biako ho asɛm.
a)	Kyerεw krataa kɔma w’adamfo a ɔwɔ sukuu foforɔ mu na kyerɛ no nsrahwɛ bi a wokɔɔ no nnansa yi.
b)	kyerεw sεnea wɔnwene kɛntɛn anaa kɛtɛ.
c)	Akrɔmfo werɛmfo bi baa mo fi anadwo bi. Kyerεw nea ɛsii nyinaa.
d)	Wopɛ sɛ woyɛ Tikyani anaa Nɛɛse?
Kenkan deɛ edidi so yi na bua nsɛmmisa no nyinaa
2. Da bi maame bi ne ne ba ketewa bi kɔɔ afum. Ɔde abɔfra no kɔtoo dua bi ase. Ogu so reyɛ adwuma no, abofra no sui. Ɔkɔmaa no nufu san de no too dua no ase. Ɔkɔtoaa n’adwuma no so. Abofra no san suu bio. Saa berɛ yi na ɔkɔre mmɔborohunufo bi bɛkotow abofra no ho de n’ataban huhuuw ne ho. Maame no huu saa no, ehu kaa no na ɔteεεm. Ɔrekɔ ne ba no ho pɛ, na ɔkɔre no tu kɔe. Ɔsan maa abofra no nufu bio de no hyɛɛ n’akyi. Ɔkɔɔ fie no wanka hwee ankyerɛ ne kunu.
Ade kyeeɛ no, maame no san kɔɔ afuw no mu. asɛm koro no ara sane sii bio. Da no de, ɔbɔɔ ne kunu amanneɛ, nanso wannye asɛm no anni. Ne nnansa so no, maame no san kɔ afuw no mu. Abofra no fii ase sui no, maame no kɔfrɛɛ ne kunu. Papa no faa n’agyan ne mmɛmma abiɛsa kurae. Woduu afuw no mu no, maame no maa ne kunu kohintawee na ɔkɔ so yɛɛ adwuma.
Abofra noo suu denneenen. Nea papa no hui ne sɛ, ɔkɔre no abɛbutuw abɔfra no ho. Papa no ho dwirii no. Ɔgyeen n’ani too n’agyan no bɔɔ ɔkɔre no. Ɔkɔre no twee ne ho. Agyan no wɔɔ abɔfra no. Na ɔkɔre no tu kɔɔ dua bi so. Papa no ne ne yere no firi ase sui berɛ a wɔhuu sɛ wɔn ba no aka baabi no. Ɔkɔre no kae sɛ, “Wɔmfa bɔne ntua papa so ka.”
a)	Da a edi kan a maame no huu ɔkɔre no, dɛn na ɔyɛe?
b)	Deɛn na ɔkɔre no yɛɛ abofra no?
c)	Mpεn ahe na maame no huu ɔkɔre no?
d)	Adɛn nti na da a ɛdi kan no, maame no ammↄ ne kunu amanneε?
e)	Adɛn nti na papa no annye ne yere asɛm no anni?
f)	Dɛn na ɛkyerɛ sɛ ɔkɔre no amma sɛ ɔrebɛyɛ abofra no bɔne bi?
g)	Kyerɛ asɛm yi ase; kohintawee.
h)	Dɛn nsɛm na ɛwɔ ayɛsɛm no mu a ɛkyerɛ sɛ abɔfra no awu.
i)	Kyerɛ eyi ase: “Wɔmfa bɔne ntua papa so ka”.
j)	Fa nsɛmfua a ɛmmoro ason to ayɛsɛm no din.
Bua nsɛmmisa a ɛwɔ ɔkasamu a edidi so yi biara mu.
3. Kyerεw edin asɛmfua a ɛwɔ ɔkasamu a edidi so yi biara mu.
a)	Nnera ɔboroo abarima no.
b)	Anigye wɔ ha.
c)	Wɔwɔ afuw
d)	Mɛnsa rekasa
e)	Yehia asomdwoe
Fa akyerεw mu nsɛnkyerɛnne a ɛfata kyerεw ɔkasamu a edidi so yi mu biara yie.
f)	Ɔde mango akutu ne aborɔbɛ bae
g)	Ghana ahenkuro ne nkran
h)	Ɛhefa na wɔkↄe
i)	Papa no maa Boatemaa sika
j)	Hɛ gyae
kyerεw edin nkyerɛkyerɛmu a ɛwɔ ɔkasamu a edidi so yi mu biara mu.
k)	Maame no fura ntama tuntum.
l)	Anomaa ketewa no tu kɔe.
m)	Wɔakum abirekyi kɛse no.
n)	Papa no boroo ne babarima onihafo no.
o)	Ɔbaa no wɔ atade dedaw bi.
Kyerεw nsɛmfua a wɔasensan ase no mu biara abirabɔ.
p)	Abɔfra no tee fie no anim.
q)	Fa sika no hyɛ adaka no ase.
r)	Papa sikani no aba.
s)	Kwaku resu.
t)	Tena ha.
2011 Ghanaian Language & Culture – (Akuapem Twi) Past Questions – Paper One
2011 Ghanaian Language & Culture – (Asante Twi) Past Questions – Paper One